Maxay Ahaayeen Eradaydii Uu Isco Alcaron Ku Yidhi Lionel Messi Intii Lagu Jiray Kulankii El-Classico? Jamaahiirta Kubadda Cagta Oo Qiyaas Cajiib Ah Sameeyay. – Latest Sports News
Maxay Ahaayeen Eradaydii Uu Isco Alcaron Ku Yidhi Lionel Messi Intii Lagu Jiray Kulankii El-Classico? Jamaahiirta Kubadda Cagta Oo Qiyaas Cajiib Ah Sameeyay.
Jamaahiirta kubadda cagta gaar ahaan kuwooda ku taxan barta bulshada ee Twitter-ka ayaa si cajiib ah u qiyaasay erayadii uu xiddiga khadka dhexe ee Real Madrid ee Isco ku yidhi kabtanka Barcelona ee Lionel Messi.
Bedelkii uu Isco kusoo galay kulankii Classico ee Sabtidii ayaa shaqsiyaad badan layaab ku noqday maadaama oo tababaraha kooxda ee Santiago Solari inta ugu badan diidanaa inuu garoonka soo galiyo.
Kulankii ugu dambeeyay ee uu Isco ciyaaray ayaa ahaa 3-dii bishii Febraury markaas oo uu dheelay shan daqiiqo oo kamid ah kulankii Alaves waxaana u xigay kulankii El-Classico walow uu ku fashilmay inuu saamayn sameeyo oo uu natiijada kusoo celiyo kooxdiisa.
Haddaba, Kaddib soo galistiisii kulanka ayuu Isco uga faa’idaystay inuu erayo ku tuuro Messi wakhti ay kubaddu baxday oo dhinac laga soo tuurayay kaameerooyinka yaana qabtay wada hadalka labada shaqsi iyadoo wajiga Leo laga dareemayay dhoola caddayn.
Eryada saxda ah ee uu Isco ku yidhi Messi ayaan ahayn kuwo si sax ah loo arkayay maadaama 26 jirkaasi uu gacantiisa saaray afka balse midaasi ma noqon mid jamaahiirta ka celisa inay mala awaalkooda gaarka ah sameeyaan.
Aragtida ay qiyaaseen jamaahiirta ayaa ah mid dhammaanteed isku mid ah waxaana ay sawirteen in Isco uu u sheegay Messi inuu u fududeeyo inuu ku biiro Barcelona.
Taageeraha koowaad oo magaca uu kusoo galo Twitter uu yahay Sahil ayaa yidhi “Isco : U sheeg Bartomeu inuu ila soo saxeexdo” iyadoo uu Messi ku jawaab celiyay waa sida uu taageeruhu qiyaasaye “Lol Saxib”
Taageeraha labaad ayaa yidhi “Isco waxa uu u sheegay Messi in uu Barcelona kula saxeexdo, Anigu dhinacayga waan ku sharadtamayaa inuu u sheegay”
Taageeraha saddexaad ayaa raacsaday “Isco oo weydiisanaya Messi haddii uu kula soo biiri karo Barca”